Demián Bichir – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Godzilla vs. Kong (2021) Unicode Godzilla နဲ့ တခြား Titan ရဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာ ဂေါ်ဇီလာကသူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲကို အနိုင်တိုက်ပြီး ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ King Kong ကတော့ ဖန်တီးထားတဲ့ Kong Skull island မှာ ရှိနေတာပါ။ အရာအားလုံး ၃ နှစ်လောက်အေးချမ်းနေချိန်မှာ Godzilla က Apex Cybernetics ဆိုတဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့် အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။ Apex ရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူဝေါ်လ်တာကတော့ Godzilla ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ ပြောသွားပေမယ့် ဘာရယ်လို့တော့မရှင်းပြခဲ့ပါဘူး။ ဝေါ်လ်တာက သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် ဒေါက်တာနေသန်ကို စည်းရုံးရင်း Hollow Earth ကို သွားဖို့ စီစဉ်တဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ။ ဒီခရီးစဉ်ထဲကို Skull Island မှာရှိနေတဲ့ King Kong ကရော ဘယ်လိုပါလာမလဲ။ ဂူတစ်ဂူမှာ ကျားနှစ်ကောင်မအောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း အခြား ...
IMDB: 6.9/10 40169 votes
The Nun (2018) Unicode The Conjuring ဇာတ်ကားမစတင်မှီ လွန်ခဲ့သော နှစ် 20 ဖြစ်တဲ့ 1952 ခုနှစ်က Romania နိုင်ငံ၊ Abbey of St. Carta ကက်သလစ်ကျောင်းမှာ သီလရှင်ငယ်တစ်ပါးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားတဲ့အတွက် ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို. Vatican ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်မှ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနှင့်သီလရှင်တစ်ပါးကို စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်.. Romania ကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက် ထိုအမှုကိုစုံစမ်းရာမှာ သာမန်သေဆုံးမှုမဟုတ်ဘဲ အောက်လမ်း၊ မကောင်းဆိုးဝါးတို.နဲ.ပတ်သက်နေကြောင်းသိရှိရပြီး ကြောက်မတ်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်များနဲ.တွေ.ကြုံရပါတော့တယ်။ Credit - M-MDB Zawgyi The Conjuring ဇာတ္ကားမစတင္မွီ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ 20 ျဖစ္တဲ့ 1952 ခုႏွစ္က Romania ႏိုင္ငံ၊ Abbey of St. Carta ကက္သလစ္ေက်ာင္းမွာ သီလရွင္ငယ္တစ္ပါးဟာကိုယ့္ကိုယ္ကိုအဆုံးစီရင္သြားတဲ့အတြက္ ဒီကိစၥကိုစုံစမ္းစစ္ေဆးဖို. Vatican ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးႏွင့္သီလရွင္တစ္ပါးကို ေစလႊတ္လိုက္ပါတယ္.. Romania ကိုေရာက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ထိုအမႈကိုစုံစမ္းရာမွာ သာမန္ေသဆုံးမႈမဟုတ္ဘဲ ေအာက္လမ္း၊ မေကာင္းဆိုးဝါးတို.နဲ.ပတ္သက္ေနေၾကာင္းသိရွိရၿပီး ေၾကာက္မတ္ဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားနဲ.ေတြ.ႀကဳံရပါေတာ့တယ္။ Credit - M-MDB
Good Kids (2016) လူငယ္သဘာဝဟာသဇာတ္ကားေလးေတြႏွစ္သက္သူေတြ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးပါ
IMDB: 6.1/10 7,909 votes